अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई के गर्लान डोनाल्ड ट्रम्पले ? - Namaste Post
अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई के गर्लान डोनाल्ड ट्रम्पले ?
नमस्ते पोस्ट २०७३, २७ मंसिर सोमबार ०२:४१ 0
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदको शपथ खाने दिन जनवरी २० नजिकिंदै गर्दा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रबासीमा चिन्ता बढ्दो छ ।
एउटा निश्चित विषय हो–आगामी दिन आप्रबासीहरुका निम्ती पहिलेकै जस्तो उर्बर अमेरिका रहनेछैन् । नीतिगत रुपमा अनुदार मानिने रिपब्लिकन पार्टीको सबैतिर९सिनेट र तल्लो सदन बहुमत छ । यसको अर्थ ट्रम्पले कुनै अलोकप्रिय नीति लिए पनि पारित गर्ने मत उनीसँग छ ।
त्यसोत निबर्तमान हुँदै गरेका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको राष्ट्रपति कार्यकाल आठबर्षबीच अमेरिकाबाट ३२ लाख आप्रबासीलाई देश निकाला गर्ने फैसला भएको थियो । जसमा १ हजार ५ सय २५ नेपाली थिए ।